‘क्वारेन्टाइन’बाट फर्केपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि….(भिडियो सहित) «
‘क्वारेन्टाइन’बाट फर्केपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि….(भिडियो सहित)
Published : 14 April, 2020 8:20 am
लम्कीचुहा नगरपालिका-१ भुरुवाकी ५३ वर्षीया महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। योसँगै लम्कीचुहामा संक्रमितको संख्या दुई पुगेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच। भारतबाट आएका रौतहट इशनाथ नगरपालिका-५ मोतीपुरका एक १९ वर्षीय किशोरमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
औरैयास्थित विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा रहेका ती किशोरको परीक्षणमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। १६ दिनअघि दिल्लीबाट फर्किएका उनी एक दिन घरमै बसेको स्थानीयले बताएका छन्।
त्यसको भोलिपल्ट स्थानीयले क्वारेन्टाइनमा बस्न दबाब दिएका थिए। संक्रमितका घरमा आमाबुवा, दुई भाइ, एक बहिनी छन्। कैलालीमा संक्रमण देखिएकी महिलासहित ५१ जनालाई यसअघि लम्की बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। काठमाडौंबाट चैत २५ गते आएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले ४४ जनाको र्‍यापिड टेस्ट गरेको थियो। त्यसमा नेगेटिभ देखिएपछि क्वारेन्टाइनका सबैलाई चैत २९ गते घर पठाइएको थियो।
वडाध्यक्ष जनकबहादुर बमले ती महिलासहित १७ जना चैत १७ गते पर्साबाट लम्की आएको बताए। नेपालबाटै आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था नभएपछि उनीहरू भुरुवास्थित आफन्तको घरमा गएका थिए।
स्थानीयवासीले सीमा क्षेत्रबाट आएको भन्दै क्वारेन्टाइनमा राख्न दबाब दिएको वडाध्यक्ष बमले खुलाए। ‘१४ दिन क्वारेन्टाइन बस्दा पनि कुनै लक्षण पनि देखिएन। र्‍यापिड टेस्ट पनि नेगेटिभ आएको थियो’, उनले भने, ‘१७ जनालाई नै चैत २९ गते क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइएको थियो।’ यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।